ကဲကုလသင်္ချာမသင်ပေးခင် စာရင်းအင်းသင်္ချာသင်ပါ - English-Video.net
Arthur Benjamin - Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty.
Arthur Benjamin makes numbers dance. In his day job, he'saprofessor of math at Harvey Mudd College; in his other day job, he'sa"Mathemagician," taking the stage in his tuxedo to perform high-speed mental calculations, memorizations and other astounding math stunts. It's part of his drive to teach math and mental agility in interesting ways, following in the footsteps of such heroes as Martin Gardner.
Benjamin is the co-author, with Michael Shermer, of Secrets of Mental Math (which shares his secrets for rapid mental calculation), as well as the co-author of the MAA award-winning Proofs That Really Count: The Art of Combinatorial Proof. Foraglimpse of his broad approach to math, see the list of research talks on his website, which seesaws between high-level math (such as his "Vandermonde's Determinant and Fibonacci SAWs," presented at MIT in 2004) and engaging math talks for the rest of us ("An Amazing Mathematical Card Trick").
Arthur Benjamin | Speaker | TED.com
Arthur Benjamin: Teach statistics before calculus!
သင်္ချာဆရာကို တစ်ယောက်ယောက်က “ကျွန်တော် လက်တွေ့ဘဝမှာ ကဲကုလသင်္ချာကို အသုံးပြုနိုင်မှာလား” ဟုအမြဲမေးလေ့ရှိကြလေသည်။ ကျွန်တော်တို့ အများစုအတွက်တော့ အသုံးမပြုနိုင်ဟု အာသာဘန်ဂျမင်က ပြောလာသည်။ သူက ဤဒီဂျစ်တယ်ခေတ်တွင် သင်္ချာသင်ကြားရေးကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နှင့်ပတ်သက်၍ ရဲဝံ့ပြတ်သားသော အဆိုပြုချက်ကို တင်ပြထားသည်။
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty. Full bio
Now, if President Obama
တကယ်လိုများ သမ္မတအိုဘားမားကသာ ကျွန်တော်ကိုများ
invited me to be the next Czar of Mathematics,
သင်္ချာပညာရပ်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် မင်းကြီးအဖြစ် ဖိတ်ခေါ်မယ်ဆိုရင်
then I would haveasuggestion for him
ဒီနိုင်ငံထဲက သင်္ချာပညာ သင်ကြားရေးကို
that I think would vastly improve
ကြီးကြီးမားမား ပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်ယူဆမိတဲ့
the mathematics education in this country.
အကြံပြုချက်တစ်ခု သူ့ထံ တင်ပြပေးစရာရှိမှာပါ။
And it would be easy to implement
အဲဒါကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ လွယ်ကူနိုင်ပြီး
The mathematics curriculum that we have
အခုကျွန်တော်တို့မှာ ရှိနေတဲ့ သင်္ချာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းဟာ
is based onafoundation of arithmetic and algebra.
ဂဏန်းသင်္ချာနဲ့ အက္ခရာသင်္ချာတို့ရဲ့ အုတ်မြစ်ပေါ်မှာ အခြေတည်ထားပါတယ်
And everything we learn after that
အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ သင်ယူကြတဲ့ အရာအားလုံးက
is building up towards one subject.
ဘာသာရပ်တစ်ခုစီသို့ ဦးတည်ပြီး တည်ဆောက်ထားပါတယ်။
And at top of that pyramid, it's calculus.
အဲဒီ ပိရမစ်ကြီးရဲ့ ထိပ်မှာရှိတာကတော့ ကဲကုလသင်္ချာပါပဲ။
ကျွန်တော် ဒီကိုရောက်လာတာ ကတော့
that I think that that is the wrong summit of the pyramid ...
ဒီပိရမစ်ရဲ့ ထိပ်ပိုင်းဟာ မှားယွင်းနေတယ် ဆိုတာပြောဖို့ပါ။
that the correct summit -- that all of our students,
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျောင်းသားတွေအားလုံး၊ အထက်တန်းကျောင်း ဆင်းဖူးသူတွေအားလုံး
every high school graduate should know --
should be statistics:
ဖြစ်နိုင်ခြေ သီဝရီ နဲ့ စာရင်းအင်းပါ။
I mean, don't get me wrong. Calculus is an important subject.
ကျွန်တော် ဆိုလိုတာကတော့…. ကျွန်တော်ပြောတာ အထင်မလွဲပါနဲ့ခင်ဗျာ။ ကဲကုလသင်္ချာဟာ အရေးကြီးတဲ့ ဘာသာရပ်တစ်ခုပါ။
It's one of the great products of the human mind.
ဒါဟာ လူသားတို့ရဲ့ မနောဉာဏ်က ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။
The laws of nature are written in the language of calculus.
သဘာဝတရားရဲ့ နိယာမတွေကို ကဲကုလသင်္ကေတစနစ်တွေနဲ့ ရေးပေးထားတာပါ။
And every student who studies math, science, engineering, economics,
နောက်ပြီး သင်္ချာ၊ သိပ္ပံ၊ စက်မှုအတတ်ပညာ၊ ဘောဂဗေဒ လေ့လာကြတဲ့
they should definitely learn calculus
ကျောင်းသားတိုင်းဟာ ကောလိပ်ရဲ့ ပထမဆုံးနှစ်အဆုံးမှာ
by the end of their freshman year of college.
ကဲကုလသင်္ချာကို သေချာပေါက် သင်သင့်ပါတယ်။
But I'm here to say, asaprofessor of mathematics,
ဒါပေမဲ့ သင်္ချာပါမောက္ခ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျွန်တော် ဒီကိုရောက်လာတာကတော့
that very few people actually use calculus
အင်မတန်နည်းပါးလှတဲ့ လူတွေလောက်ကပဲ ကဲကုလသင်္ချာကို
inaconscious, meaningful way, in their day-to-day lives.
သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေမှာ ကိုယ်တိုင်သတိမူပြီး ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ သုံးကြတယ်ဆိုတာပြောဖို့ပါ။
statistics -- that'sasubject that you could,
စာရင်းအင်းသင်္ချာ ဆိုတာ နေ့စဉ်ဘဝမှာ သုံးနိုင်တဲ့
and should, use on daily basis. Right?
သုံးသင့်တဲ့ ဘာသာရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ မှန်ပါရဲ့လားခင်ဗျာ
It's risk. It's reward. It's randomness.
ဒါကဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအကြောင်း၊ ဆုလာဘ်အကြောင်း၊ ကြုံရာကျပန်းဖြစ်မှုအကြောင်းပါ။
It's understanding data.
ဒါက အချက်အလက်ကို နားလည်ခြင်း ပညာပါ၊
I think if our students, if our high school students --
ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် တကယ်လို့သာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသားတွေ
if all of the American citizens --
တကယ်လို့သာ အမေရိကန် နိုင်ငံသားတွေအားလုံး
knew about probability and statistics,
ဖြစ်နိုင်ခြေ သီဝရီ နဲ့ စာရင်းအင်ပညာ အကြောင်းကို နားလည်ကြမယ် ဆိုရင်ပေါ့လေ။
we wouldn't be in the economic mess that we're in today. (Laughter) (Applause)
ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့ရောက်နေတဲ့ စီးပွားရေးအရှုပ်တော်ပုံထဲ ရောက်ခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ (ရယ်သံများ) (လက်ခုပ်သံများ)
Not only -- thank you -- not only that ...
ဒါတင်မက -- ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ -- ဒါတင်မကသေးပါဘူး ...
but if it's taught properly, it can bealot of fun.
တကယ်လို့သာ အဲဒါကို နည်းမှန်လမ်းမှန် သင်ကြားမယ်ဆို အရမ်းကို ပျော်စရာကောင်းပါလိမ့်မယ်
I mean, probability and statistics,
ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ဖြစ်နိုင်ခြေ သီဝရီ နဲ့ စာရင်းအင်ပညာ ဆိုတာ
it's the mathematics of games and gambling.
ကစားပွဲတွေနဲ့ လောင်းကစားပွဲတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ သင်္ချာပါ။
It's analyzing trends. It's predicting the future.
ဒါဟာ ရှေးရှုရာ လမ်းကြောင်းတွေကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းပါ၊ အနာဂတ်ကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းရခြင်းပါ။
Look, the world has changed
ဒီမှာခင်ဗျ၊ ကမ္ဘာကြီးက အန်နာလော့ analog စနစ်ကနေ
ဒီဂျစ်တယ် digital စနစ်ဆီကို ကူးပြောင်းခဲ့ပြီ
And it's time for our mathematics curriculum to change
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သင်္ချာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေကိုလည်း
from analog to digital,
အန်နာလော့စနစ်ကနေ ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ကို ကူးပြောင်းရမယ့် အချိန်ပါ။
from the more classical, continuous mathematics,
ရှေးကျတဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ် ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ သင်္ချာကနေ
to the more modern, discrete mathematics --
ခေတ်မီတဲ့ သီးခြားရပ်တည်နေတဲ့ သင်္ချာဆီကို ကူးပြောင်းရမှာပါ
the mathematics of uncertainty,
ဖြစ်နိုင်ခြေ သီဝရီ နဲ့ စာရင်းအင်ပညာ ဆိုတဲ့
of randomness, of data --
that being probability and statistics.
အချက်အလက်များဆိုင်ရာ သင်္ချာပညာဆီကို ကူးပြောင်းရမှာပါ
In summary, instead of our students
နိဂုံးချုပ်ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားတွေ
learning about the techniques of calculus,
ကဲကုလသင်္ချာရဲ့ နည်းနာနိဿယတွေကို သင်ကြမယ့်အစား
I think it would be far more significant
သမတ်ကိန်းမှ ပုံမှန် သွေဖည်ခြင်းနှစ်မျိုး ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုမှန်း နားလည်ကြရင်
if all of them knew what two standard deviations
ပိုပြီး သိသိသာသာအကျိုးရှိလာမယ်လို့ ကျွန်တော်ကတော့ ထင်ပါတယ်၊
from the mean means. And I mean it.
Translated by Skylar Swe
Reviewed by sann tint
ကဲကုလသင်္ချာမသင်ပေးခင် စာရင်းအင်းသင်္ချာသင်ပါ | TED Talk | TED.com